Wamkelekile kwi-Zofia Cottage kwiHlathi laseBelair - I-Airbnb
Wamkelekile kwi-Zofia Cottage kwiHlathi laseBelair
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguEye On Spaces
UEye On Spaces yi-Superhost
Wamkelekile kwiCottage Number 7, Zofias Cottage. Sahlala kwihlathi leMajestic Belair Forest. Indawo yethu ekhethekileyo ikuvumela ukuba ubuye kwaye ulungelelanise nendalo kunye neendawo eziyingqongileyo. Kulapha apho unokuphumla kwaye ukonwabele ukujonga izilwanyana zasendle kwaye uxabise ubuhle bokwenyani behlathi kunye neendlela zalo. KwiPropati unendawo yomlilo ngaphandle kwekhabhini UKUBA ujonge indawo yepati iZofia ayisiyiyo loo ndawo. Kukwakho nedekhi ye-16x16 ngasekhohlo kwendlu encinci
Zijikeleze kwisitayile saseScandinavia kwaye wenze ngaphezulu kwale ndlu. Yonwabela i-spa njengokuziva kwaye uhlala umphetho weplanga kunye nesinki yamatye, kunye neshawari yeglasi engenamthungo enemigangatho eshushu kunye neethayile zase-Italiya. Ukonwabele ikhitshi elitsha elihlaziyiweyo elinezixhobo ezitsha ezimnyama kunye neendawo zokubala zamanzi zequartz kunye ne-Italian tiled back splash. Kwakhona isitovu esitsha seSoho Wood kobo busuku bubandayo bupholile kwaye uhlale phantsi kwaye umamele umdlali werekhodi we-retro kunye ne-assortment yeerekhodi zakudala kwaye ubuyele kwiintsuku ze-Speed High Speed W | FI kwi-50 mbps, nayo yongezwa. Kukho i-intshi engama-50 ye-smart TV kwigumbi lokuhlala Ukuba uneNetflix okanye i-akhawunti ye-Amazon Prime ungayonwabela imuvi okanye umboniso ngobo busuku bunethayo okanye bubandayo, kukwakho nomdlali weDVD onabantwana kunye neeDVD zabantu abadala....Kwakhona wonwabele Umoya ophakathi ehlotyeni ezishushu, Akukho ziyunithi zokupholisa umoya zefestile ezingxolayo. Yonwabela iJacuzzi kwiveranda okanye isidlo seRomantic se-2. I-Space yinto esizingca ngayo kwaye siyiphathe ngentlonipho ngokungathi sindwendwela ikhaya lomnye umntu.
IJacuzzi ikhuselwe kwiveranda
I-Smart TV kunye neBar yesandi
I-Soho Wood Stove
I-BBQ kunye nePatio Ifenitshala
Nespresso umenzi weKofu/ kunye nomenzi weKofu oqhelekileyo
Umgodi womlilo kwisiza
Idekhi enkulu eyi-16x16 ngaphambili enamagumbi okuphumla ukuze uphumle
Isitshixo soMbane (Akukho Matshixo afunekayo)
Nje ukuba utsale uhola wendlela kwaye unyuke uqhube ungene ehlathini kwaye ufike kwiNkosana, uya kuyiqonda into eyenza le ndawo ikhetheke kangaka, kunye nebala lokudlala, inkundla yaseBadminton kunye neendlela, le ndawo intle yiparadesi yeemoto ezihamba ngekhephu, kunye ukuloba umkhenkce. IRestaurant Hillside Resort Store iphezulu kwindlela eyimizuzu emi-5 ukusuka kwiNkosana, kwakhona kufutshane kukwakho nevenkile ekwindlela iBelair ebizwa ngokuba yiThomsons Corner Kananjalo unokuthatha nayiphi na igrosari okanye ipropane eyongezelelweyo onokuyifuna. Singaphakathi kwemizuzu emi-5 ukuya kwi-10 kuzo zonke iilwandle- iGrand Beach, iLester Beach, iHillside Beach, iAlbert Beach, neVictoria.
Umbuki zindwendwe ngu- Eye On Spaces
I-Eye on Spaces iyafumaneka nangaliphi na ixesha ngemibuzo kwi-Cottage yethu
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bélair